Inona no aloan'ny ankizy amin'ny volany?
Asa tapa-potoana: mameno ny volanao am-paosy
Fomba fandoavana sy fanodikodinam-bola marina
Mba hahafahan'ny ankizy mianatra hatramin'ny mbola kely ny fomba fitantanana vola, dia tokony hanomboka manome vola am-paosy ny ray aman-dreny amin'ny taona farany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Satria ny zaza mianatra manao raharaham-bola amin'ny fomba milalao ankehitriny dia tsy hanana olana amin'izany intsony.
Ny fampahalalana rehetra dia tokony ho takatra ho toy ny mpitari-dalana ihany - safidy azo atao:
Vola am-paosy isan-kerinandro
Age 6 ka hatramin'ny 7: € 1,50 - € 2,00
Age 8 ka hatramin'ny 9: € 2,00 - € 3,00
Volan'ny paosy isam-bolana
Age 10 ka hatramin'ny 11: € 12,00 - € 15,00
Age 12 ka hatramin'ny 13: € 16,00 - € 18,00
Age 14 ka hatramin'ny 15: € 20,00 - € 25,00
Age 16 ka hatramin'ny 17: € 30,00 - € 40,00
Amin'ny taona 18: € 60,00 - € 70,00 (raha tsy manana ny karamanao manokana)
Azo atao ihany koa ny manome vola efa-taona ho an'ny paosy. Amin'izany dia afaka mividy am-piavonavonana amin'ny lisitry ny toeram-pivarotana lehibe izy, ohatra, izay naloany ho azy.
Ny zaza iray dia tokony ho afaka manapa-kevitra samirery momba izay hovidiny amin'ny volany any am-paosiny. Anisan'izany ny zavatra mahafinaritra na lafo vidy toa ny magazine, CD, boky, penina, kilalao, vatomamy na firavaka akanjo.
Ny vola ara-paosy mahazatra dia tsy tokony hampiasaina amin'ny zavatra ilaina sy voatokana toy ny fitaovam-pianarana, ny vola fanampiana, tapakila na sakafo. Ho an'ny zavatra lafo kokoa, toa ny mandeha amin'ny sinema, ny ray aman-dreny dia afaka manisy fanavakavahana indray mandeha isam-bolana ary manohana azy io ihany koa.
Hafa ny fisehoan-javatra raha ny vidin'ny smartphone no resahina, satria ny smartphone dia toa resaka mazava ho azy, saingy entana lafo vidy ihany. Noho izany, ireo dia tokony aloa amin'ny vola am-paosin'ilay zaza, aleo mampiasa karatra mialoha sy mizana madiodio.
Ny ankizy antitra 12 taona dia afaka mahazo teti-bola fanampiny hatramin'ny 50 euro isam-bolana ho an'ny akanjo, kitapo, finday na fanatsarana tarehy. Miankina amin'ny toe-bolan'ny fianakaviana izany. Raha mikasa ny hividy manokana ny tanora dia tsy maintsy manangona vola mifanaraka amin'izany.
Amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa ny manome vola fanampiny raha tsy amin'ny tambiny. Ka hitan'ny ankizy ho valisoa tena izy. Ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra dia tokony hianatra fa afaka manampy amin'ny volany am-paosy izy ireo amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny asa sy ny fanaovana fanomezana kely.
Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fanampiana ao an-trano, izay mazàna tsy misy fandoavambola. Ary ny ray aman-dreny dia tsy tokony handoa vola fanampiny ho an'ny naoty tsara na fitondran-tena tsara. Ny hany mampiavaka azy dia ny saram-panamarinana fanta-daza, izay raisin'ny ankizy matetika amin'ny faran'ny taom-pianarana ho an'ny naoty tsara.
Ny ankizy avy amin'ny faha-12 taonany dia afaka mahazo zavatra mora foana, ohatra amin'ny fanasana fiara, fandefasana gazety, alika mandehandeha, fitaizan-jaza, fanapahana ny bozaka amin'ireo mpifanila vodirindrina aminao na fanaovana lesona. Zava-dehibe: ny fanatsarana ny vola am-paosy dia tsy tokony hiteraka fihenan'ny vola am-paosy mahazatra. Raha tsy izany dia hahavery ny fampiakarana azy ny fahazoana vola fanampiny sy fanatsarana ny toe-bolanao manokana amin'ny alàlan'ny fahombiazanao manokana sy ny fanoloranao tena ho an'ny ankizy sy ny tanora.
Raha nanapa-kevitra ny handoa vola am-paosin-janany ny ray aman-dreny dia tokony hanao izany matetika sy amin'ny andro nifanarahana izy ireo. Inona moa fa ny ray aman-dreny? Arakaraka ny taonan'ny zaza dia omena vola na alefa. Toy izao no ianarany mandamina vola. Ny habetsaky ny vola am-paosy dia mety tsy hitombo na hihena mihitsy ho valisoa na sazy.
Ilaina ihany koa ny mampita ampahibemaso ny olan'ny vola amin'ny ankohonana
Marina indrindra izany rehefa tery ny raharaha noho ny haba be, tsy an'asa na findramam-bola misy. Tokony ho fantatry ny ankizy fa ny vola dia natao indrindra hivelomana: hofan-trano, herinaratra, rano, telefaona ary sakafo. Tsy mahamenatra ny fahantrana.
Ny ray aman-dreny dia tokony hampita amin'ny zanany fa ny fahombiazana, ny fifaliana, ny fahasambarana, ny fitiavana ary ny fahafaham-po dia tsy miankina amin'ny entan'ny mpanjifa novidiana, ny fananana ara-nofo, na ny fanatanterahana ny nofy eo no ho eo, na lehibe na kely.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. Aogositra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekoly, Vola, vola ary asaKeywords -bola, vola, tanora, ankizy, vola am-paosy, Mianara miatrika vola
indray Lahatsoratra taloha: Jogging | Fitness sy fanatanjahan-tena
more Lahatsoratra manaraka: Torohevitra fanomanana | VELONA